Puntland oo wada qorshe ka dhan ah ururka loo yaqaan Takfiir wal hijrah. | Caasimada Online
Sep 15, 2017 - Comments off
Qoraal ka soo baxay shirkii Gollaha Wasiiradda dowladda Puntland ee shalay ayaa lagu sheegay in dawladu ay gacanta ku hayso qorshe ay doonayso inay kula dagaalanto waxa ay ugu yeertay ururadda xagjirka ah oo uu ku jiro ururka dadku u yaqaan Takfiir wal hijrah.
Dowladdu goboleedku waxay ku eedaysay Ururka Takfiirka inay degaamo ka mid ah Puntland ay ka wadaan dhibaato akhlaaqeed iyo mid bulsho. Dhibaatadaasi oo ay ku sheegeen inay tahay in ururkaasi ay qoysaska Soomaaliyeed ay ka ka xaystaan caruurta kadibna ay geeyaan goobo aan la garanayn
“Gollaha xukuumddu waxay caddeeyeen in ay jiraan degaamo Puntland ka mid ah oo ay ka waddaan ururka Takfiiru dhibaato akhlaaqeed iyo mid bulsho iyagoo hadda bilaabay in ay Ilmaha ka qaataan qoysas Soomaaliyeed, kadibna ay geeyeen goobo aan la garanayen, arrintan ayaa waxay ka mid tahay qorshe cusub oo ay la yimaadeen ururka xafjirka ah ee Takfiirku, dhacdooyinkan ka dib waxay gollaha xukuumadda Puntland gacanta ku haysaa qorshe looga hortago dhibaatooyinka Ururada xajirka ah oo dhan gaar ahaan ururka Takfiirka.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxya gollaha Wasiiradda Puntland.
Inkastoo xukuumadda ayan faahfaahin ka bixiyay qorshaha ay ka dambacsan yihiin Ururka Takfiirka oo iyagu isugu yeera Jaamacatul Muslimiin, ururka ayaa xarumo ganacsi, guryo iyo masaajido u gaar ah ku leh Magaalooyinka Bosaso iyo Qardho, iyadoo xaruntooda ugu weynina ay ku taalo degmada Qardho, waxay kaloo samaysteen tuulo u gaar ah, dhul-beereed iyo xoolo miyi oo ka abuuray dhulka miyiga ee goboladda Bari iyo Karkaar.
Dowladda Puntland waxay sanadkan aynu ku jirno go’aano lagu xaaraantinmaynayo ka soo saartay ururka Saadicuuna bil-xaq, go’aamadaasi ayaan shaqayn ama noqday kuwo la iska ilaaway.
Xukuumadii Puntland uu madaxweynaha ka ahaa C/raxmaanaan Faroole ayaa sanadkii 2012kii xabsiga u taxaabtay in ka badan 50 nin oo ka tirsan Jamaacada dadku ugu yeeraan Takfiirka, ka dib marii ciidamadu ay weerareen Masjid ku yaal Bosaso, halkaasi oo ay ku oogayeen Salaadii Jimcaha. Saddex bilood ka dib ayaa la sii daayay, Maxkamadna lama horkeenin.
Dhinaca kale, Gollaha xukuumadda waxay sheegeen in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay waddaan ciidamadda Puntland oo si gaara ugu hawlan goobo ay ku dhuumaalaysanaan Alshabaab iyo sidii kale ay ku hayaan daba-galo joogto ah oo ku saabsan xogta waxay ay ugu yeeraan xogta cadowga Puntland